Maitiro Ekumira Kugunun'una Nguva Yese: 7 Hapana Bullsh * t Matipi! - Blog
Maitiro Ekumira Kugunun'una Nguva Yese: 7 Hapana Bullsh * t Matipi!
Hupenyu hwakaoma. Zviri nyore kwazvo kuwira mumusungo wekutsoropodza, kuparadzwa, kusviba, uye kunyunyuta.
Iko kunogara kunoratidzika kuve kune rimwe dambudziko kana imwe iri kuputirwa panhau dzese kana kukwira kupinda muhupenyu hwako hwega.
Saka chii chisiri kunyunyuta nezvacho? Sei usingafanire kunyunyuta nezvekuti zvinhu zvakaipa sei?
Chikonzero ndechekuti kunyunyuta kazhinji hakuiti chero chinhu. Chichemo chingava chishandiso chinobatsira kana chakatemwa se 'iri idambudziko uye tinofanirwa kurigadzirisa,' asi vanhu havawanzo kunyunyuta nenzira iyoyo.
Kuti chichemo chive chinobatsira uye chinogadzira, chinofanirwa kugadzirisa nyaya uye kubatsira kusundidzira vanhu kuenda kumhinduro. Muchirevo chakakura chakakosha.
maitiro ekuziva kana iwe uri wakanaka
Muchirevo chako pachako hazvisi, nekuti kazhinji ndiwe wega unogona kunyatso kudzora mamiriro ako. Iwe haugone kudzora zviito zvevamwe. Unogona chete kuedza kuvakurudzira kana kuvakurudzira kuti vaite chinhu.
Uye zvakadaro negativity, muchimiro chekunyunyuta, inowanzo kupihwa mubairo nevanhu vachichera zvitsitsinho mukati uye vachiramba kufamba, nekuti hapana munhu anoda kurwiswa.
Kugunun'una zvakare kune mhedzisiro isingatarisirwe yekupa simba vanhu vanofarira kupokana nekuda kwekukonana. Vamwe vanhu havadi kuve nani kana kuita kuti zvinhu zvive nani. Ivo vakasununguka kuumburuka mumatambudziko avo nekuti inzvimbo yakachengeteka yavanonzwisisa.
Uyezve, chiito chekunyunyuta chinowanzo kukurudzira chimiro chisina kunaka icho vamwe vanhu vasingade kutsungirira. Vanhu havadi kutandara nevanhu vane hasha, vane hasha vasina chavanoita kunze kwekunyunyuta. Iyo inowanzo kukwiza kune vanhu vakatikomberedza uye inosiya munhu wese mune yakaipa mamiriro.
Zvakareruka kungo cheka shamwari iyoyo (kureva iwe) kubva uye usazobata navo futi pane kuyedza kuchinja maonero avo kana maonero.
Kunyunyuta kunoshandurawo mutoro uye kunotikurudzira kuti tizvione isu pachedu seanotambudzwa, pachinzvimbo chemunhu akazvimiririra anokwanisa kuzvisarudzira.
Ehe, unogona kubatwa zvakaipa nemumwe munhu. Izvo zvakanaka uye zvinoshanda. Asi kana vakaramba vachizviita, vachiramba kuchinja, kana kuramba kubvuma kuti pane chero dambudziko, zvinobatsira sei kunyunyuta? Zvese zvaunogona kuita panguva iyoyo kutora mutoro wako wega mufaro uye nekuchinja mamiriro ako.
Kugunun'una kusingaperi kunoderedzawo simba uye kukosha kwekunyunyuta chaiko. Kana munhu wacho achigara achinyunyuta pamusoro pezvinhu zvisina zvazvinobatsira, nei munhu achifunga kuti kunyunyuta kwechokwadi kwavanako kunoshanda? Vazhinji vanhu vangangozvinyora sekunyunyuta zvisina basa kana kufunga kuti munyunyuti arikungoshamisira.
Sezvauri kuona, kune zvakawanda zvakanaka zvikonzero zvekucheka pasi pakunyunyuta. Asi unozviita sei?
kusvirana nemunhu asingade kurambana
1. Funga nezvevateereri vako.
Ndiani chaizvo ari kuzoteerera chichemo? Munhu here ane hanya nekuona dambudziko ragadziriswa? Ndiye here mumwe munhu anogona kubatsira kugadzirisa chichemo? Kana zvisiri izvi, saka zvinogona kunge zvisina kukodzera kunyunyuta nezvazvo.
Nekudaro, pamwe urikunyunyuta kuyedza kutsvaga mhinduro kuchinetso chauri kusangana nacho. Muchiitiko ichocho, zvirinani kusagunun'una, asi pachinzvimbo kubvunza kana iwe uchikwanisa kumhanyisa mamiriro apfuura munhu iyeye kuti awane maonero avo pazviri.
Gadzira iyo se, “Ndiri kuva nedambudziko randisingakwanise kuzvinzwisisa. Ndingawana pfungwa dzenyu here? ” Nokuita izvozvo, hausi kunyunyuta, asi kugadzirisa matambudziko.
kuita kuti vanhu varege kutaura
2. Funga dzimwe nzira.
Kumwe kunyunyuta kuri nekuti isu, sevanhu, hatisi tese tinogadzikana neshanduko. Dzimwe nguva tinonyunyuta nekuti hatifarire pfungwa yechinhu chatinoziva nekuchinja.
Izvo zvakakosha kuti utarise zvauri kunyunyuta nezvazvo uye kuti ndedzipi dzimwe nzira. Kana usati wafunga dzimwe nzira, unogona kuona kuti imwe nzira yekuita nayo zvinhu inopedzisira yave nani.
Zvinogona kuchengetedza nguva, mari, kushanda nesimba, kana kuita shanduko isingaperi iyo inobatsira chose chakazara. Shanduko kuitira shanduko haina hazvo kunaka, asi inogona kunge isiri yakaipa futi.
3. Gamuchira kusagadzikana.
Kusagadzikana chinhu chakakosha. Zvinotibatsira kutikurudzira kunatsa, kuzvishandira pachedu, kana kuita zvirinani hupenyu hwedu.
Tinogona kugunun'una pamusoro pekusagadzikana kwedu kana kuti tinogona kuzvigamuchira sechimwe chinhu chedu isu chete chekushanda nekushanda kuburikidza nacho.
Nhau huru ndeyekuti kushanda kuburikidza nekusagadzikana kunobatsira kutivaka isu, kutiita isu kunyanya kushinga, kutiita isu kusimba kupfuura zvataive tisati tamboita kusagadzikana kwatakaona.
Izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kugamuchira hunhu hwakaipa hwevamwe vanhu kana kusaremekedza. Hupenyu huchakanda zvinonetsa zvakakwana kwauri zvausingade kubvumira kusaremekedza.
4. Usatanga hurukuro nekunyunyuta.
Funga kumashure kune hurukuro dzawakamboita mumasvondo maviri apfuura. Vangani vehurukuro idzi vakatanga nekunyunyuta kweimwe mhando?
zvekuita kana wabata mukomana wako achinyepa
'Iwe murume, basa rakanga rakaipa kwazvo.'
'Mamiriro ekunze aya ari kundiuraya!'
'Sei izvi zvisina kuitwa?'
Zviri nyore kwazvo kuita nekuti isu tinogara tiri pasi pehuwandu hwakanyanya hwekunetseka kuti tiite zvinhu. Paunenge uine zvinhu zvakawanda zvekuita, kunyangwe kukanganisika kudiki kunogona kunge kuri kurongedza zvakakwana kupa chichemo.
Edza kusazvibvumira iwe kuti unyore mune iwo kutenderera kana iwe uchigona kuzvidzivirira. Yakapusa, 'Hei, zviri kufamba sei?' inogona kuve iri nani nzira yekuita kuti hurukuro iende.
5. Dzidza hunyanzvi hwekushoropodza kunovaka.
Vanhu vazhinji vanovhiringidza kutsoropodza kunovaka nekunyunyuta. Dzimwe nguva zvinodaro nekuti ivo chaivo havagoni kuona mutsauko. Dzimwe nguva inyaya yekuti havadi kubvuma dambudziko kana ivo vari kuyedza kudzivirira mutoro.
Musiyano uripo pakati pekushoropodza kunovaka uye chichemo ndicho chinangwa chekupedzisira.
Kutsoropodza kunovaka chinhu chatinopa kubatsira munhu kuvandudza. Iwe unogona kunongedzera kukanganisa kana zvirevo zvisina kusimba zvakanyorwa mumunhu kunyora kuti vagone kudzidza kubva kune izvo zvikanganiso.
Nekudaro, kana iwe ukangoti 'Zvakanaka, izvi zvinoyamwa' saka hausi kunyatso kupa chero kushoropodza zvachose. Zvese zvauri kuita kugunun'una izvo zvisina kubatsira kana mutsa.
6. Zviudze pachako pazvinenge zvichidiwa.
Kugunun'una kazhinji inzira yekungotaura-zvehasha zvekutaura zvaunoda pasina kubvunza zvakananga. Aya maitiro ehunhu haatombogona kukuwanira izvo zvaunoda kana zvaunoda.
yakajairika nguva yekudanana
Imwe nzira yakatwasuka kutaurirana kuri pachena kunonyatso gadzirisa dambudziko pane kudonhedza mazano.
Mazano akavharirwa sekunyunyuta anotaridzika se: 'Ndinoshuva kuti dai ukaita izvi…' 'Ndinoshuva kuti dai warega kuita izvi…' 'Sei uchigara uchiita izvozvo…?'
Pane mukana wakanaka wekuti munhu wauri kutaura naye arege kuturikira chichemo chako sechinhu chinonyanya kukunetsa.
Chirevo chakananga chiri nani pane chichemo chisina kunanga. Chirevo chakananga chinotaridzika senge: 'Hamugoni henyu kuita izvi?'
7. Wongorora kuti sei uri kunyunyuta.
Iko kazhinji kune chikonzero nei munhu achinyunyuta zvakanyanya.
Kune vanhu vazhinji, icho chikonzero kushushikana. Kushungurudzika kunopenda zvese mune zvisina kunaka kune kwazvakarerekera mwenje. Zvakaoma kuona zvinhu zvakanaka zviri munyika kana uropi hwako huri kukuudza kuti zvese zvakashata.
Funga nguva yekupedzisira iwe pawakanzwa kuva netariro kana kufara. Yaiva rini? Yakanga iri nguva yakareba sei? Dai yaive nguva yapfuura, zvingave zvakakodzera kutaura kune chipangamazano wehutano hwepfungwa nezvezviri kuitika muhupenyu hwako.
Iko kugunun'una kunogona kungova chiratidzo chedambudziko rakakura rinoda kugadziriswa kuti ugone kuwana rugare rwepfungwa uye mufaro.
Maitiro Ekurega Kuva Anorwadza: Matanho gumi Ekukunda Kushatirwa Kwako
Maitiro Ekumira Kuva Anotsoropodza Nguva Dzese: 8 Hapana Bullsh * t Matipi!
pamusoro gumi zvinhu zvekuita kana iwe uchinetseka
hukama hwakafamba nekukurumidza zvakanyanya kugadzirisa
kubata ne kuziva zvese
kuva murunyararo newe pachako makotesheni
nzira yekuudza shamwari yaunovada usinga zviitise zvakashata